Shiinaha Soosaarayaasha Kumbuyuutarka Soosaarayaasha iyo alaableyda | GZSJ
Taxanaha SJ Single Screw Extruder wuxuu qaatay xakameynta soo noqnoqodka wuxuuna si wax ku ool ah u yareyn karaa isticmaalka awoodda habka gudbinta iyadoo la adeegsanayo habab xiriir toos ah oo mootada iyo dhimista qalabka. Furku wuxuu adeegsadaa nooc gooni ah oo leh madaxa madaxa fiicni kaas oo xoojin kara ficilka xiirida maaddada, hagaajinta saamaynta balastikada. Soo-saarahaani wuxuu la socdaa xasilooni wanaagsan iyo isticmaalka tamarta oo hooseeya.
Single Screw Extruder: Faahfaahin
Codsiga: Kordhinta tuuboyinka jiingado
Caaga la farsameeyay: PE, PP, PVC, PA, EVA
Wax soo saarka (KG / H): 0-100 kg / h
Naqshadeynta Naqshadeynta: Kali - Wareeg
Waxyaalaha Wareejinta: 38 CrMoAIA
Ballaca Ballaca: 30mm ---- 90mm
Wareeji L / D: 28: 1 ama 30: 1
Xawaaraha Xawaaraha (rpm): 0-75 rpm
Goobta Orihin: Zhejiang, Shiinaha
Danab: 380V, 440 V ama kartoo
Awooda: 4KW --- 55KW
Miisaanka: 800 KG --- 1500KG
Ka dib iibka Adeegga: Taageerada khadka tooska ah
Qodobbada Iibinta Furaha: Si Fudud Loogu Shaqeeyo
Nooca Suuqgeynta: Badeecad Cusub 2020
Waxyaabaha: Birta Birta ah
Fiidiyowga Tijaabada Makiinadaha: Waa La Heli Karaa
Faa'iidada ugu Weyn
1: Ku habboon qalabka kala duwan ee polyolefin: PE / PP / PVA / PA / EVA iyo caagagga kale. SJ extruder single screw wuxuu kobciyaa nidaamka xakamaynta isku xirnaanta mashiinka-mashiinka sare si loogu kalsoonaado xakamaynta otomaatiga ah ee khadka oo dhan.
2: Nidaamka xakamaynta heerkulka heer sare si loo hubiyo xasilloonida habka wax soo saar. Naqshadeynta isku dhafan ee qaboojinta hawada xoog iyo jeexdin quud xoog leh waxay xaqiijineysaa feejignaanta iyo xasilloonida geedi socodka ujeeddada.
3: Nidaamka wadista waxqabadka sare; Xidhan oo fudud in la ilaaliyo.
15-20 kg / saacaddii
20-35 kg / saacaddii
30-45 kg / saacaddii
45-65 kg / saacaddii
60-90 kg / saacaddii
70-150 kg / saacaddii
Hore: beebka biyaha hoostooda
Xiga: Mashiinka Sameynta Xawaaraha Sare / Corrugator